Indaba Yesithathu Yamathoyizi ifilimu lesithathu kusuka Inda
ⓘ Indaba Yesithathu Yamathoyizi ifilimu lesithathu kusuka Indaba Yamathoyizi ngonyaka ka-2010. Kuyisithombe sefilimu esishukumisayo sobukhulu bePstrong. Lokhu kuk ..
ⓘ Indaba Yesithathu Yamathoyizi
Indaba Yesithathu Yamathoyizi ifilimu lesithathu kusuka Indaba Yamathoyizi ngonyaka ka-2010. Kuyisithombe sefilimu esishukumisayo sobukhulu bePstrong. Lokhu kukodwa ekunikezeni ngephutha ngamathoyizi amaningi, kufaka ne-cowboy, eyaziwa njengoTom Hanks, nomngani wakhe osendaweni, endlini yezingane edlala. Umnikazi wazo usegugile manje futhi kumele abuyele ngaphambi kokuba anyamalale esikoleni. Kepha ibhere epinki izama ukubashisa.
Le filimu yalungiswa iminyaka eminingi kanti abagxeki bathi izwi, imizwa nomculo kuyamangaza. Abanye bathi kuhle ekuqaleni noma kwifilimu yesibili, kodwa abanye abayenzi. Kwakuyenye yamafilimu ashukumisayo enza imali kakhulu lapho ephuma.
Wikipedia: Indaba Yesithathu Yamathoyizi